Madaxweyne Farmaajo oo hambalyo udirey shacabka Soomaaliyeed. - Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Madaxweyne Farmaajo oo hambalyo udirey shacabka Soomaaliyeed.
Madaxweyne Farmaajo oo hambalyo udirey shacabka Soomaaliyeed.
FARRIINTA CIIDDA CARAFO
Asalaamu Calaykum Warraxmatullaahi Wa Barakaatuhu.
Waxaan ugu hambalyeynayaa dhammaan Ummadda Soomaaliyeed iyo Muslimiinta Caalamka munaasabadda barakeysan ee Ciidda Carrafo oo ah mid ku weyn diinteenna iyo dhaqankeenna suubban.
Maalmahan barakaysan ee Ciidda Carrafo waa maalmo ku suntan khayrka iyo cibaadada, iyadoo dadka Muslimiinta ah ay ku howlan yihiin gudashada waajibaadka Xajka, waloow sannadkan aysan u suurta gelin Muslimiin badan in ay gutaan waajibkan diiniga ah sababo caafimaad oo la xiriira cudurka safmarka ah ee COVID-19.
Sidaas darteed, waxaan ku boorrinayaa dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan xujeyda Soomaaliyeed ee qorshaynayey sannadkan in ay gutaan rukniga xajka in ay beddelkiisa ku dadaalaan bixinta sadaqada iyo kaalmaynta dadka danyarta ah oo iyaduba ka mid ah acmaasha ugu wanaagsan ee Rabbi loogu dhowaado.
Si gaar ah waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa dhammaan Ciidammadeenna Qalabka Sida ee geesiyaasha ah oo har iyo habeen u taagan difaaca qarankooda. Gaar ahaan waxaan hambalyo u dirayaa halyeeyadeenna ku qaadanaya maalmahan barakaysan furimaha dagaalka iyo xarumaha difaaca dalka.
Ugu dambeyntii, waxaan Alle ka baryayaa in ciiddan teeda kale uu nagu gaarsiiyo barwaaqo, midnimo, horumar iyo amni buuxa. Sidoo kale waxaan Alle ka baryaynaa inuu u naxariisto dhammaan dadkeennii naftooda u huray difaaca iyo horumarka dalkeenna.
Previous articleSuldaan Guud ee somaliland Oo Shacabka Ku Hambalyeeyey Munaasibadda Ciidal-Adxaha Awgeed.
Next articleReysarwasaare Maxamed Xuseen Rooble oo hambalyo udirey shacabka Soomaaliyeed.